အမြိုးသားတှစှေဲလမျးတတျကွတဲ့ အမြိုးသမီးတယောကျဆီက အပွုအမူ နဲ့ အကွငျနာဝမြှေမှုတှေ...
December 5, 2020 December 2, 2020 by Thuta Music
အမျိုးသားတွေစွဲလမ်းတတ်ကြတဲ့ အမျိုးသမီးတယောက်ဆီက အပြုအမူ နဲ့ အကြင်နာဝေမျှမှုတွေ
အမျိုးသားတွေက မားစ်ဂြိုဟ်ကလာပြီး အမျိုးသမီးတွေက ဗီးနပ်စ်ဂြိုဟ်က လာတယ်လို့ဆိုပ်ါတယ်။ ကျား နဲ့ မ မှာ လိုအပ်ချက် စိတ်ဆန္ဒ နဲ့ အပြုအမူတွေက တယောက်နဲ့တယောက် ကွာခြားချက်တွေရှိတာကြောင့် စိတ်ရောကိုယ်ပါပျော်ရွှင်ရတဲ့ နှစ်ကိုယ်တူဘဝကို တည်ဆောက်ကြဖို့ဆိုရင် တယောက်သဘာဝ တယောက် သိထားကြဖို့ လိုလာပါတယ်။ အို သ်ိပ်ချစ်ဖို့ကောင်းတဲ့ အမျိုးသမီး ဆိုတာမျိုး ယောကျာင်္းတွေဘက်က ခံစားလာရဖို့ သူတို့ ကြိုက်နှစ်သက်တတ်တဲ့ အပြုအမူလေးတွေ ကြည့်ကြရအောင်လား။
1. သူ့ကို ပူးကပ်ပွေ့ဖက်ထားတာမျိုး ကိုယ်လက်တွဲဖော်နဲ့ အထိအတွေ့အရရော စိတ်ခံစားမှုအရရော နီးကပ်စွာထိတွေ့ရင်းနှီးနေရတာမျိုး သူတို့သိပ်မြတ်နိုးပါတယ်။ သူ့ရင်ခွင်ထဲ ကိုယ်က နူးညံ့စွာတိုးဝင်တာမျိုး၊ သူ့ပခုံးအပေါ်အသာအယာမှီတာမျိုးက သူ့တို့အတွက် ကိုယ်နဲ့ပတ်သက်ပြီး တလောကလုံးကိုပိုင်ဆိုင်ထားရသလိုမျိုး စိတ်ပိုင်းဆိုင်ရာ စိတ်ချလုံခြုံစေမှာပါ။
2. သူကိုယ့်ကို နမ်းပြီးတဲ့အခါ ကိုယ်ပြုံးတဲ့အပြုံးလေး ဒီလိုတုံ့ပြန်မှုမျိုးက သူအသည်းအကြီးကြီးခိုက်စေမှာပါ။ သူနမ်းတာ ကိုယ်ကမြတ်နိုးပါတယ်ဆိုတဲ့ ခံစားချက်မျိုးပြန်ရတာမျိုး ယောကျာင်္းလေးတိုင်း လိုအပ်ကြပါတယ်။
3. သူ့ကို သူမသိလည်း ကိုယ်ကငေးနေတာမျိုး အဲ့လိုအချိန်တွေ သူ့ကို ကိုယ်ကငေးနေတုန်း ကိုယ့်ကိုသူ အငိုက်ဖမ်းမိသွားရင် သူတအားပျော်ပါတယ်။ ရထားစီးနေတုန်း ပါတီပွဲရောက်နေတုန်း တယောက်နဲ့တယောက် လှမ်းနေတဲ့အချိန်တွေ အဲ့လို သံယောဇဉ်ဝေ့သီနေတဲ့ အငေးလေးတွေနဲ့ သူ့ကိုပြုစားထားနိုင်ပါတယ်။ ဒါ့ထက်ပိုပြီး သူသိပ်ကြိုက်တဲ့ ဖီလင်တော့ မရှိတော့လောက်အောင်ပဲ။
4. သူလုပ်သလို ကိုယ်ကလိုက်တုလုပ်တာမျိုး သိသိသာသာကြီးလိုက်လုပ်ရင်တော့ ချော်တောငေါ့သလို ဖြစ်ကုန်မှာပေါ့။ အသာအယာလေး နူးညံ့စွာ မသိမသာ သူဆံပင်သပ်ရင် ကိုယ်က လိုက်သပ်ဖြစ်တာမျိုးပေါ့။ သူ့ကို ဆွဲဆောင်နိုင်ပါလိမ့်မယ်။
5. ကိုယ်ကရိုးသားပေးတာမျိုး ရေရှည်လက်တွဲကြဖို့ ရည်ရွယ်ထားရင် တဦးပေါ်တဦး ရိုးသားကြတာအကောင်းဆုံးပါ။ ကျားမ မရွေး တဖက်သားရဲ့ရိုးသားမှုကို တန်ဖိုးထားကြပါတယ်။
6. သူပြောတဲ့ဟာသတွေကို လိုက်ရယ်ပေးတာ အမျိုးသားတွေ အမျိုးသမီးတွေဆီက အလိုချင်ဆုံးထဲက တချက်ပ်ါပဲ။ သူဟာသပြောတဲ့အချိန် ကိုယ်က စိတ်လိုလက်ရ ရယ်မောမိရင် ဖရဏာပီတိ ဂွမ်းဆီထိပြီး သူတအားကျေနပ်ပါတယ်။
7. သူ့ဆံပင်လေးတွေ ထိုးဖွကစားတာ အတူတူရုပ်ရှင်ကြည့်နေရင်ပဲဖြစ်ဖြစ်၊ သူကားမောင်းနေတုန်းပဲဖြစ်ဖြစ် သူ့ရဲ့ဆံပင်လေးတွေကို အသာအယာထိုးဖွဆော့ကစား ယုယပွတ်သပ်ပေးတာက သူ့ကိုဘယ်လောက်တွယ်တာလဲဆိုတာ သူခံစားမိစေပါတယ်။ သူအရမ်းပျော်မှာပါ်။
8. လွမ်းရင်လွမ်းတဲ့အကြောင်း ပြောတာမျိုး ခဏခွဲခွာနေရတဲ့ အခါမျိုးတွေမှာ ဖုန်းခေါ် စာပို့ပြီး ဘယ်လောက်လွမ်းရကြောင်း အလွမ်းပြေဖွင့်ပြောပေးပါ။ သူ့ကို ပျော်ရွှင်စေပါတယ်။
9. ကိုယ်ခန္ဓာချင်းထိတွေ့ရတာ သူသိပ်ကြိုက်ပ်ါတယ် သဘောက လိင်ကိစ္စကိုဆိုလိုတာမဟုတ်ပဲ စိတ်ကူးပေါက်ရင်ပေါက်သလို သူ့ကိုပွေ့ဖက်ပေးတာ၊ ပါးလေးကို နမ်းမွှေးပေးတာ၊ သူ့နဲ့ဘေးချင်းကပ်ထိုင်နေရင် သူ့ဒူးခေါင်းလေး ပေါင်လေးအပေါ် ကိုယ့်လက်လေး တင်ထားပေးတာ၊ လမ်းသွားနေရင်း လက်နဲ့သိုင်းဖက်ထားပေးတာမျိုးတွေပေါ့။ လိင်ကိစ္စထက်ကိုပိုပြီး ကိုယ့်ကို စွဲလမ်းနှစ်ခြိုက်စေမယ့် အရာတွေပါ။​တိုက်​ခန်းပေါ်မှ အမျိုးသားတစ်​ဦး ခုန်​ချမှုဖြစ်ပွား
10. ချီးကျူးပေးပါ ကိုယ့်လက်တွဲဖော်ယောကျာင်္းကို အမြဲချီးကျူးပေးဖို့ လိုပါတယ်။ ချီးကျူးပေးခြင်းက သူတို့ကို အသိအမှတ်ပြုတဲ့သဘောဖြစ်စေပြီး တကယ်ချစ်မြတ်နိုးခံရတဲ့ စိတ်ပျော်ရွှင်မှုကို ရစေပါတယ်။ သူ့ကို သူ့အရှိအတိုင်း ကိုယ်က ကျေနပ်လက်ခံတဲ့ သဘောဖြစ်စေပြီး သူပြောတာ သူလုပ်တာလေးတွေကို ကိုယ်က အမြဲချစ်သက်ဝင်နေပုံ ခံစားရစေတာကြောင့်ပါ။
ကိုယ်က လေးစားလို့ တန်ဖိုးထားလို့ သူ့ဆီက ကိုယ်အခက်အခဲအပေါ် ဘယ်လိုမြင်တယ် ဘယ်လိုလေးလုပ်လို့ရမလဲ ဆိုတာ အကြံဥာဏ်တောင်းဖြစ်တယ်ဆိုရင် ဒါ ကိူယ့်လက်တွဲဖော်အတွက် အခွငိ့ထူးခံ ခံစားမှုပါပဲ။ သူ့ဆီက အကြံဥာဏ် နဲ့ သူ့အမြင်ကို အမြဲမေးပေးပါ။
12. သူ့ရဲ့ ကိုယ်ပိုင်လွတ်လပ်ချိန် Personal Space ကို နားလည်လက်ခံပေးပါလိုအပ်တဲ့အချိန် ဘော်ဒါသင်းပင်းတွေနဲ့ လွတ်လွတ်လပ်လပ်သွားပါစေ။ သွားဖို့အားပေးပါ။ ကိုယ်လည်း ကိုယ့်မိန်းကလေးသူငယ်ချင်းအချင်းချင်း ဆုံလို့ရတာပဲ။ တခါတလေမှ ဘာအကြောင်းနဲ့ဖြစ်ဖြစ် သူတယောက်တည်းနေချင်တဲ့အခါမျိုးတွေဆို ပြသာနာမရှာပဲ နားလည်လက်ခံပေးပါ။ ဒီလိုနားလည်ပေးမှုက သူ့ကို စိတ်ချလုံခြုံစေတဲ့ အထူးတလည်ချစ်မြတ်နိုးမှုလို့ သူခံစားရမှာပါ။
Credit : Luck Myanmar
အမြိုးသားတှစှေဲလမျးတတျကွတဲ့ အမြိုးသမီးတယောကျဆီက အပွုအမူ နဲ့ အကွငျနာဝမြှေမှုတှေ
အမြိုးသားတှကေ မားဈဂွိုဟျကလာပွီး အမြိုးသမီးတှကေ ဗီးနပျဈဂွိုဟျက လာတယျလို့ဆိုပျါတယျ။ ကြား နဲ့ မ မှာ လိုအပျခကျြ စိတျဆန်ဒ နဲ့ အပွုအမူတှကေ တယောကျနဲ့တယောကျ ကှာခွားခကျြတှရှေိတာကွောငျ့ စိတျရောကိုယျပါပြျောရှငျရတဲ့ နှဈကိုယျတူဘဝကို တညျဆောကျကွဖို့ဆိုရငျ တယောကျသဘာဝ တယောကျ သိထားကွဖို့ လိုလာပါတယျ။ အို သိပျခဈြဖို့ကောငျးတဲ့ အမြိုးသမီး ဆိုတာမြိုး ယောကြာင်္းတှဘေကျက ခံစားလာရဖို့ သူတို့ ကွိုကျနှဈသကျတတျတဲ့ အပွုအမူလေးတှေ ကွညျ့ကွရအောငျလား။
1. သူ့ကို ပူးကပျပှဖေ့ကျထားတာမြိုး ကိုယျလကျတှဲဖျောနဲ့ အထိအတှအေ့ရရော စိတျခံစားမှုအရရော နီးကပျစှာထိတှရေ့ငျးနှီးနရေတာမြိုး သူတို့သိပျမွတျနိုးပါတယျ။ သူ့ရငျခှငျထဲ ကိုယျက နူးညံ့စှာတိုးဝငျတာမြိုး၊ သူ့ပခုံးအပျေါအသာအယာမှီတာမြိုးက သူ့တို့အတှကျ ကိုယျနဲ့ပတျသကျပွီး တလောကလုံးကိုပိုငျဆိုငျထားရသလိုမြိုး စိတျပိုငျးဆိုငျရာ စိတျခလြုံခွုံစမှောပါ။
2. သူကိုယျ့ကို နမျးပွီးတဲ့အခါ ကိုယျပွုံးတဲ့အပွုံးလေး ဒီလိုတုံ့ပွနျမှုမြိုးက သူအသညျးအကွီးကွီးခိုကျစမှောပါ။ သူနမျးတာ ကိုယျကမွတျနိုးပါတယျဆိုတဲ့ ခံစားခကျြမြိုးပွနျရတာမြိုး ယောကြာင်္းလေးတိုငျး လိုအပျကွပါတယျ။
3. သူ့ကို သူမသိလညျး ကိုယျကငေးနတောမြိုး အဲ့လိုအခြိနျတှေ သူ့ကို ကိုယျကငေးနတေုနျး ကိုယျ့ကိုသူ အငိုကျဖမျးမိသှားရငျ သူတအားပြျောပါတယျ။ ရထားစီးနတေုနျး ပါတီပှဲရောကျနတေုနျး တယောကျနဲ့တယောကျ လှမျးနတေဲ့အခြိနျတှေ အဲ့လို သံယောဇဉျဝသေီ့နတေဲ့ အငေးလေးတှနေဲ့ သူ့ကိုပွုစားထားနိုငျပါတယျ။ ဒါ့ထကျပိုပွီး သူသိပျကွိုကျတဲ့ ဖီလငျတော့ မရှိတော့လောကျအောငျပဲ။
4. သူလုပျသလို ကိုယျကလိုကျတုလုပျတာမြိုး သိသိသာသာကွီးလိုကျလုပျရငျတော့ ခြျောတောငေါ့သလို ဖွဈကုနျမှာပေါ့။ အသာအယာလေး နူးညံ့စှာ မသိမသာ သူဆံပငျသပျရငျ ကိုယျက လိုကျသပျဖွဈတာမြိုးပေါ့။ သူ့ကို ဆှဲဆောငျနိုငျပါလိမျ့မယျ။
5. ကိုယျကရိုးသားပေးတာမြိုး ရရှေညျလကျတှဲကွဖို့ ရညျရှယျထားရငျ တဦးပျေါတဦး ရိုးသားကွတာအကောငျးဆုံးပါ။ ကြားမ မရှေး တဖကျသားရဲ့ရိုးသားမှုကို တနျဖိုးထားကွပါတယျ။
6. သူပွောတဲ့ဟာသတှကေို လိုကျရယျပေးတာ အမြိုးသားတှေ အမြိုးသမီးတှဆေီက အလိုခငျြဆုံးထဲက တခကျြပျါပဲ။ သူဟာသပွောတဲ့အခြိနျ ကိုယျက စိတျလိုလကျရ ရယျမောမိရငျ ဖရဏာပီတိ ဂှမျးဆီထိပွီး သူတအားကနြေပျပါတယျ။
7. သူ့ဆံပငျလေးတှေ ထိုးဖှကစားတာ အတူတူရုပျရှငျကွညျ့နရေငျပဲဖွဈဖွဈ၊ သူကားမောငျးနတေုနျးပဲဖွဈဖွဈ သူ့ရဲ့ဆံပငျလေးတှကေို အသာအယာထိုးဖှဆော့ကစား ယုယပှတျသပျပေးတာက သူ့ကိုဘယျလောကျတှယျတာလဲဆိုတာ သူခံစားမိစပေါတယျ။ သူအရမျးပြျောမှာပျါ။
8. လှမျးရငျလှမျးတဲ့အကွောငျး ပွောတာမြိုး ခဏခှဲခှာနရေတဲ့ အခါမြိုးတှမှော ဖုနျးချေါ စာပို့ပွီး ဘယျလောကျလှမျးရကွောငျး အလှမျးပွဖှေငျ့ပွောပေးပါ။ သူ့ကို ပြျောရှငျစပေါတယျ။
9. ကိုယျခန်ဓာခငျြးထိတှရေ့တာ သူသိပျကွိုကျပျါတယျ သဘောက လိငျကိစ်စကိုဆိုလိုတာမဟုတျပဲ စိတျကူးပေါကျရငျပေါကျသလို သူ့ကိုပှဖေ့ကျပေးတာ၊ ပါးလေးကို နမျးမှေးပေးတာ၊ သူ့နဲ့ဘေးခငျြးကပျထိုငျနရေငျ သူ့ဒူးခေါငျးလေး ပေါငျလေးအပျေါ ကိုယျ့လကျလေး တငျထားပေးတာ၊ လမျးသှားနရေငျး လကျနဲ့သိုငျးဖကျထားပေးတာမြိုးတှပေေါ့။ လိငျကိစ်စထကျကိုပိုပွီး ကိုယျ့ကို စှဲလမျးနှဈခွိုကျစမေယျ့ အရာတှပေါ။တိုကျခနျးပျေါမှ အမြိုးသားတဈဦး ခုနျခမြှုဖွဈပှား
10. ခြီးကြူးပေးပါ ကိုယျ့လကျတှဲဖျောယောကြာင်္းကို အမွဲခြီးကြူးပေးဖို့ လိုပါတယျ။ ခြီးကြူးပေးခွငျးက သူတို့ကို အသိအမှတျပွုတဲ့သဘောဖွဈစပွေီး တကယျခဈြမွတျနိုးခံရတဲ့ စိတျပြျောရှငျမှုကို ရစပေါတယျ။ သူ့ကို သူ့အရှိအတိုငျး ကိုယျက ကနြေပျလကျခံတဲ့ သဘောဖွဈစပွေီး သူပွောတာ သူလုပျတာလေးတှကေို ကိုယျက အမွဲခဈြသကျဝငျနပေုံ ခံစားရစတောကွောငျ့ပါ။
ကိုယျက လေးစားလို့ တနျဖိုးထားလို့ သူ့ဆီက ကိုယျအခကျအခဲအပျေါ ဘယျလိုမွငျတယျ ဘယျလိုလေးလုပျလို့ရမလဲ ဆိုတာ အကွံဉာဏျတောငျးဖွဈတယျဆိုရငျ ဒါ ကိူယျ့လကျတှဲဖျောအတှကျ အခှငိ့ထူးခံ ခံစားမှုပါပဲ။ သူ့ဆီက အကွံဉာဏျ နဲ့ သူ့အမွငျကို အမွဲမေးပေးပါ။
12. သူ့ရဲ့ ကိုယျပိုငျလှတျလပျခြိနျ Personal Space ကို နားလညျလကျခံပေးပါလိုအပျတဲ့အခြိနျ ဘျောဒါသငျးပငျးတှနေဲ့ လှတျလှတျလပျလပျသှားပါစေ။ သှားဖို့အားပေးပါ။ ကိုယျလညျး ကိုယျ့မိနျးကလေးသူငယျခငျြးအခငျြးခငျြး ဆုံလို့ရတာပဲ။ တခါတလမှေ ဘာအကွောငျးနဲ့ဖွဈဖွဈ သူတယောကျတညျးနခေငျြတဲ့အခါမြိုးတှဆေို ပွသာနာမရှာပဲ နားလညျလကျခံပေးပါ။ ဒီလိုနားလညျပေးမှုက သူ့ကို စိတျခလြုံခွုံစတေဲ့ အထူးတလညျခဈြမွတျနိုးမှုလို့ သူခံစားရမှာပါ။
သငျ့ကိုအပြျောကွံတာမဟုတျပဲ လကျထပျဖို့ထိရညျရှယျထားတဲ့ ခဈြသူမှနျးသိသာစတေဲ့ အခကျြမြား…
ဒီအခကျြလေးတှကေို လဈလြူမရှုတတျဘူးဆိုရငျတော့ သူဟာ ခဈြသူကောငျးတဈယောကျပါ